Bamse: madaxkutida caalamka ugu xoogga wayn - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Bamse oo 50 jirsaday
Bamse: madaxkutida caalamka ugu xoogga wayn
Bamse oo 50 jirsaday sannadka
La daabacay måndag 25 januari 2016 kl 17.07
Sheekada qoraalka sawirrada ee Bamse, ayaa ka mid ah sheekooyinka qoraallada lagu dheehey sawirrada ee dalka Sweden kuwooda ugu caan-san, oo dhowaantan buuxinaya 50 sannadood. Xuska dhalashada Bamse – ahna madax-kutida ugu xoogga badan caalamka ugu naxariista badan ayaa lagu xusi doonaa sannadka oo dhan dalka dhammaantii.
Dhalashada Bamse ayaa ka bilaaban doonta ban-dhigyo carweed lagu qaban doono madxafka sheekooyinka sawirrada ee magaalada Stockholm.
Tacaburrada Bamse ayaa sidoo kale weli ku nool xusuusta Rune Andréasson, ahna soo saarihii sheekooyinka sawirrrada Bamse ee taxanaha ah. Noloshiisa ayaa ku saleey-san wiil ku hamiyi jiray inuu gaaro laba gool: Inuu noqdo qoraa buugagta sheekooyinka sawirrada ee musalsalka iyo inuu noqdo jilaa, xirfaddaasina oo uu soo dhigtay. Labadiisii xirfadood ayaa isugu soo ururey qaab sawireedka sawirka Bamse – Madax-kutida caalamka ugu awoodda badan.
- Xaqiiqdii waxaan bilowgii damac-sanaa inaan aflaan ka sameeyo, hase yeeshee suurtagal iima ahayn sannadihii afartameeyadii, kontameeyadii oo aan carruur ahaa. Awood dhaqaale dalka kama aaney jirin. Hase yeeshee kolkii aan bilaabay inaan sameeyo sheekooyin qoraallo-sawireed ayay iila muuqdeen sidii filim-sawireed.
- Waxaa jiri jirey wakhti ey tuugada ugu tuug-san ey tuuladan yar ka yeeli jireen sidii ey doonaan. Illaa uu ugu dambeeyntii nasiib wanaag uu tuulada ka yimaado shakhsi joojiyay axmaqnimadii ey wadeen – waxaa tuulada soo gaaray Bamse.
Bamse, madax-kutida caalamka ugu xoogga badan ayaa markii ugu horreeysay caalamka u soo if-baxday muddo iminka ey ka soo wareegtey 50 sannadood. Codkii aad maqleeyseenna wuxuu ahaa barnaamij ka baxay idaacadda la iska daawado ee SvT sannadkii 2014.
Madax-kutidan yar ee Bamse, ahna madax-kutida caalamka ugu xoogga badan kolka ay cunro malabka ayeeyo, ayaa sidoo kale waxay sheeko musalsal ahaan ah ugu soo baxday war-geeyska toddobaadlaha ee lagu magacaabo Allers, halkaasina oo uu marti ku ahaa muddo saddex sannadood iyo bar ah. Haka uu dabadeed mu’alifkii Bamse Rune Andréasson uu soo saaray buugii ugu horreeyay ee tacbiirradii Bamse.
Mu’alifka sheekada Bamse Rune Andréasson ayaa saaameeyn waxaa ku yeeshay iyo inuu sheekooyinka alifo shirkadda mareeykanka ee Walt Disneys, waana arrin uu marar badan carabaabay:
- Inaan shheekadeeyda u isticmaalay madax-kuti, waxay ahayd mid lama huraan ahayd. Kolkii aan ku fekeray inaan alifo sheeeko-sawireed xayawaan ayay ii soo baxday in shirkadda Disney ay isticmaashay dhammaan xayawaanka noocyadiisa kala duwan marka laga reebo madax-kutida. Intaaa waxaa dheeraa inaan ka heli jiray madax-kutida, welina waxaan haystaa boombale madax-kuti oo haddiyad la ii siiyay aniga oo sannad jira. Hase yeeshee muddo ayaan ka fekeray nooca xayawaan oo aanay shirkaadda Disney isticmaalin, sida uu idaacadda Sweden u sheegay
Rune Andréasson mar uu wareeysi siiyay bilowgii sagaashameeyadii.
Bamse oo leh dareen aad u sareeya ee dhanka cadaaladda iyo moraalka ayaa kaalin ballaaran oo muhiimad ku fadhida ka qaatay korriimmada dhallaan fara badan oo ku dhaqan dalkan Sweden. "Ma jirto cid ku hesha barbaarin wanaag-san dil iyo ciqaab ". "Qaar badan oo daciif ah waxey ka guuleey-san karaan qof xoog leh haddii ey isu kaashadaan ". "Waa geesi-nimo in la qirto inay cabsi ku heeyso." – waa qayb yar oo ka mid ah tallooyinka uu Bamse siin jiray saaxiibadiisii qaaliga ahaa ee Lille Skutt iyo Skalman.
Sannadka oo uu Bamse konton jirsanayo ayaa looga dabaal-degi doonaa dhammaan dalka baaxaddiisa, iyadoona carwooyin lagu xusayo dhalashadiisa iyo riwaayado lagu qaban doono goobo kala duwan ee dalka ka mid ah, waxaana carwooyinkaa midda ugu horreeysa lagu qaban doonaa magaalada Stockholm bisha abriil ee foodda innagu soo haysa. Halka gabagabada sannadka lagu soo ban-dhigi doono markii ugu horreeysay filimkiisii ugu dambeeyay ee lagu magacaabo "Bamse iyo gabadhii sixirooladda", halka iminkaba madxafka buugag-sawireedka ee magaalada Stockholm ay ka socoto ban-dhig cusub oo ciddii doonaysa ay ka daawan karto sawir-gacmeedyadii ugu horreeyey ee tacaburradii Bamse. Markku Haapala oo ka howl-gala madxafka ayaa u xil-saaran abaabulka carwadan:
- Sawir-gacmeedyadan waa kuwii ugu horreeyay ee la sameeyay intii u dhexeeysay sannadihii 1966 illaa iyo 1969. Saddexdii sannadood ee ugu horreeyey. Qiyaastii
65-70 warqadood, waa kuwa halkan suran. Muddadaana waxaa la sameeyey guud ahaan 176 bog ayaan u maleeyn. Sawir-gacmeedka aan iigu xiisaha badan waa midkan bogga koowaad ku sawiran.
- Halka waxaa yaala sawir-gacmeedkii ugu horreeyay ee Bamse laga sawiro. Halkaasina oo lagu soo ban-dhigey xayawaankii kala duwanaa ee sheekooyinka ku jiray. Sawir-gacmeedyadii xigey ayuu tacaburkii bilowday. Laakiin middan waa middii xayawaanka lagu soo ban-dhigayey
- Dhammaan ey ku jiraan, marka laga reebo jiirka – Husmusen oo isagu gadaal kaga soo biiray.
Bamse ayaa si tartiib tartiib ah u noqday sumad uu dalkanik u caan yahay, kolka laga hadleyo dhanka moraalka iyo siyaasaddaba. Isagoona mar walba u heelanaa siduu ku caawin lahaa xayawaanka tabarta daran iyo inuu mar walba diyaar la ahaa fikir moraalka u wanaag-san.
Sannadihii sagaashameeyadii ayaa Bamse lagu soo saarey 15 luuqadood oo kala duwan. Kusaawina oo ey ka mid ahaayeen luuqadaha ruushka, jarmalka, bulgaarka, noorwiijiyaanka iyo daanishka. Charlotta Borelius, ahna madaxa soo saaraha Bamse, oo dhambaalka mail-ka u soo dirtay laanta idaacadda Radio Sweden ayaa sheegtay in Bamse uu iminka ku soo baxo luuqadaha iswiidhishka, finishka iyo luuqadda waqooyiga saamiga.
Dhallaan badan ayaa ku koreya, qaar badanina horey ugu barbaareen Bamse. Per wuxuu ka mid ahaa dhallaankii Bamse ku la barbaaray. Wuxuuna ka mid noqday dadyoowga sida aadka ah u xiiseeya Bamse. Wuxuuna ka mid ahaa dadyoowgii daawashada u tagay carwada Bamse.
- Waa sawirro-gacmeedyo aad u qurux badan. Wuxuu sameeyay sawirro aad u asal ah oo dhallaan-nimadii la isku deyi jirey in la koobiyeeyo. Waa sawirro markiiba la aqoon-san karo. Waa iswiidhish Disney oo ey ku jiraan xayawaan xiisa badan. Hoowshaa oo dhan isaga ayaa keli-nimo u qabtay. Xitaa qoraallada. Aadn ayaan uga heli jiray oo intaan sawiro ayaan derbiga guriga ku dheg-san jiray.
Kolkii uu geeriyooday Rune Andréasson sannadkii 1999 waxaa horay u jirey dadyoow badan oo sawir-gacmeedyo taxane ah ka sameeyey Bamse iyo sheekooyinkiisii tacaburka ahaa. Joornaaladii Bamse ee loogu jeclaa ayaa laga iibiyey shirkadda sawir-gacmeedyada aflaanta ee Egmont, hase yeeshee ay weli xuquuq magaca Bamse ay weli leedahay shirkadda qoyska ee ka aloo-san nawaaxiga Löddeköpinge oo dhacda gobolka Skåne. Iminkana waxaa gacanta ku haya wiilashii uu dhalay Rune Andréasson.